अभिभावकको चिन्ताका विषय | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अभिभावकको चिन्ताका विषय
२०७६ आश्विन १४, मंगलवार ११:३४ गते
छोराछोरी बैगुनी भइदिँदा
बाबुआमाका पीडा, दुःखकष्ट, सङ्घर्षका अनुभूति कति हुन्छन्, भनी साध्य छैन । छोराछोरीलाई यी कुराको कुनै मतलब हुँदैन । सानोमा हामीले नै तिनलाई दुःख नहोस् भनेर आफ्ना दुःख लुकाउने गर्दछौँ । ठूला भएपछि अथवा कुरा बुझ्ने भएपछि पनि बाबुआमाका भावना नबुझ्दा कम्ती दुःख हुँदैन ।
भन्ने नै हो भने अभिभावकले आफूलाई तिनै सन्तानका लागि बलिदान गरेका हुन्छन् । आमाहरुले रुप बिगारेर छोराछोरी जन्माउँछन्, दुःख सहेर हुर्काउँछन् । मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर नहाँसेका भए हाम्रा छोराछोरी जीवनभरि हामीजस्तै रोइरहने थिए । यति ठूलो तपस्या गरेर पाएका सन्तानले तिनै आमाको भावना नबुझ्दा, बाबुको सङ्घर्षलाई नजान्दा र एकदमै बैगुनी हुँदा बाबुआमालाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक पनि हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्ना गतिविधि र कर्तव्यलाई अविचलित भएर जारी राख्नुपर्दछ, किनकि यो संसारको नियम हो । छोराछोरीसित अभिभावकले धेरै ठूलो आशा, अपेक्षा र चाहना गर्नु बेकार छ । चाहनासहितको, आशासहितको र अपेक्षासहितको अभिभावकत्वले पीडा जन्माउँछ । त्यसैले, छोराछोरीलाई हामीले निरपेक्ष भएर त्याग गर्नुपर्दछ । कुनै पनि आशा नराखी ‘यो मेरो कर्तव्य हो, छोराछोरीलाई माया मान्नु मेरो धर्म हो, यसको बदलामा तिनले मलाई घृणा नै गर्छन् भने पनि केही छैन । भोलि ती ठूला भएपछि र म बूढो भएपछि पाल्नेछन् भने पनि केही छैन । तर, मैले आज मेरो तर्फबाट सकेको गर्नुपर्छ’ भन्ने महान् सोचाइ भएका अभिभावकलाई दुःख हुँदैन ।
सबै प्राणीले छोराछोरी बनाउँछन्, तिनका लागि दुःख गर्छन्, तर तिनले छोडेर जान्छन् । यो संसारको नियति हो । निश्चय पनि बाबुआमाको योगदान छोराछोरीले बिर्सनुहुँदैन, तिनको नित्य सेवा गर्नुपर्दछ, तर पनि गर्दैनन् भने केही गर्न सकिँदैन । ‘मैले यिनको हेरचाह र सेवा गरेको छु, यिनले पनि मेरो गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचाइ राख्दा पीडा हुन्छ । निश्चय पनि छोराछोरीले बाबुआमाको योगदान सम्झन्छन्, सम्झनुपर्छ र तिनलाई सम्मान र सेवा गर्नुपर्दछ, तापनि त्यो कुरा यदि बिर्सन्छन् भने त्यसको पापधर्म तिनलाई नै हुन्छ । बाबुआमा यो कुराले दुःखी हुने होइन । ‘यो धेरै बाबुआमा र छोराछोरीको कथा हो’ भन्ने सोचेर अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ ।
पेसा र घरबीचको सन्तुलन
अभिभावकका घरबाहिरको जिम्मेवारी र घरभित्रको जिम्मेवारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने क्रममा पनि धेरै तनाव महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘जागिरमा जाऊ, व्यापार वा व्यवसायमा जाऊ, काममा जाऊ, छोराछोरीको विद्यालयमा जाऊ, तिनको गृहकार्यमा ध्यान देऊ, घरमा आइपर्ने कामहरु गर’, कति झन्झट छ । विशेष गरी कामकाजी महिलाहरुलाई यसले सताउँछ । सानासाना छोराछोरी हुँदा तिनको चिन्ता हुन्छ । कसको जिम्मामा छोडेर जागिरमा जाने, तिनलाई दूध खुवाउने वा खाजा खुवाउने समय कसरी मिलाउनेजस्ता कुरा जटिल छन् । घरमा पर्ने अनेक काम र छोराछोरीको रेखदेख वा हेरचाहलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने विषय साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण छ । तर, यो चुनौतीलाई चिरेर अघि बढ्नुको विकल्प पनि हामीसित छैन । यो पनि सबैसित घट्ने घटना हो । आखिर यही चुनौतीले त हामीलाई अभिभावक बनाउने हो, बाबा र आमा बनाउने हो । सजिलो छैन, बाबुआमा हुन ।
बेलाबेलामा छोराछोरी बिरामी हुन्छन् । तिनको स्वास्थ्य बिग्रन्छ । के खाने, के नखाने ? भन्ने ज्ञान तिनलाई हुँदैन । कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ । यस्तो बेलामा ‘मेरो सन्तानलाई केही हुन्छ कि’ भन्ने पीर अभिभावकलाई पर्दछ । कति छोराछोरी गर्भमै रोग बोकेर आएका हुन्छन् । कति अपाङ्ग हुन्छन् । कति सुस्त हुन्छन् । कति दृष्टिविहीन छोराछोरीका बाबुआमा बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
कति जन्मजात, कति प्राकृतिक, कति दुर्घटना र कति अन्य कारणले रोगी, अपाङ्ग र अस्वस्थ बन्न पुगेका छोराछोरीलाई हेर्ने, स्याहार गर्ने, तिनको शिक्षादीक्षामा ध्यान दिने कुरा तपस्या हो । छोराछोरीलाई रोग लाग्यो भने बाबुआमालाई चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो । हामी आत्तिन्छौँ, डराउँछौँ । त्यसलाई पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर निराश, हतास र उदास हुने काम कहिल्यै गर्नुहुँदैन ।
बालबालिका यदि जन्मजात अपाङ्ग छन्, सुस्त छन् भने पनि दुःखी हुनुहुँदैन । वर्तमान सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीकी छोरी अपाङ्ग र सुस्त छिन्, तर उहाँले कति प्रेमले उनको सेवा गर्नुहुन्छ । समय र परिवेशले कहिलेकाहीँ हामीलाई अलि धेरै जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसलाई झर्केर भन्दा हाँसेर निर्वाह गर्नु महानता हो ।
यदि रोग लागेको छ भने उपचारको प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नो तर्फबाट शतप्रतिशत प्रयास गर्नुपर्दछ, यो अभिभावकको महान् दायित्व पनि हो । तर, कामको परिणाम शतप्रतिशत हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । सुखद परिणामको आशा गर्ने हो, तर जे हुन्छ त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पनि होइन ।
बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा सक्दो लगानी गरेका हुन्छौँ, हामीले । आजभोलि त वरपरको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सक्नेभन्दा पनि बढी नै लगानी गरेको देखिन्छ, अभिभावकले बाबुनानीको पढाइमा । पैसा खर्च भएको छ, समय खर्च भएको छ, चिन्ता र चासो खर्च भएको छ, श्रम र पसिना खर्च भएको छ, तर छोराछोरीको पढाइ खर्च गरेअनुसारको हुँदैन । यस्तो देख्दा बाबुआमालाई अत्यन्त दुःख लाग्छ । छोराछोरीको न त राम्रो अनुशासन छ, न बोलीचाली राम्रो छ, न संस्कार राम्रो छ, न पढाइ राम्रो छ । सबैतिर निराशामात्रै । चित्त बुझाउने कुनै बाटो छैन । अक्षर पनि उस्तै नराम्रो ।
विद्यालयमा नियमित शुल्क तिरेकै छ । बेलाबेलामा ट्युसन पनि राखेकै छ । उस्तै परे घरमै शिक्षक बोलाएर पढाउन पनि लगाएकै छ । होस्टेलमा पनि पु¥याएकै छ । उसले भन्नेबित्तिकै भनेजस्ता कापी, कलम, किताब, झोला आदिआदि कुराको व्यवस्था गरेकै छ । तर पनि पढाइ राम्रो छैन । भनेजस्तै नतिजा आउँदैन । कहिले कुन विषयमा कमजोर, कहिले कुन विषयमा कमजोर । वरपर छिमेकीका छोराछोरीले निधारमा अबिर लगाएर आउँदा आफ्नो बाबुनानी भने रून्चे मुख लाएर घरमा आएको दृश्यले अभिभावकलाई पिरोल्नु पिरोल्छ ।
यस्तो स्थितिमा पनि हामी सम्हालिनुको विकल्प छैन । पढाइलेखाइको विषय विशिष्ट विषय हो । एउटा विषयमा बच्चा कमजोर वा पछाडि पर्नुका कारण धेरै हुन्छन् । तिनको समाधानतिर धैर्यका साथ लाग्नुपर्दछ । सबैले उत्तिकै राम्रो गर्न सक्छन् वा सबैको बराबर नतिजा आउनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक होइन । अवश्य पनि मिहिनेत, बारम्बारको प्रयासले नतिजालाई तलमाथि पार्न सकिन्छ, तर सम्पूर्णरुपमा बदल्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । हाम्रो काम प्रयास गर्ने हो, सक्दो गर्ने हो । यदि आफ्ना छोराछोरी पढाइलेखाइका गतिविधिमा अलिकति पछि परे भने कुन विषय वा क्षेत्रमा ती अघि बढेका छन्, त्यो पत्ता लगाएर त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु उत्तम देखिन्छ । असफलता असफलता यी दुवै सामान्य विषय हुन् । बिस्तारै बच्चाले सिक्दै जाने हो, बुझ्दै र उन्नति गर्दै जाने हो भन्ने सोचेर धैर्यका साथ अभिभावक अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ ।
अभिभावकलाई चिन्ता हुने अर्को विषय हो बच्चाको साथसङ्गत । कस्ता साथीसित हिँड्ने हो, कता जाने हो, के गर्ने हो, कतै दुव्र्यसनमा पर्ने हो कि ? जस्ता प्रश्नहरुले हरेक अभिभावकलाई सताउँछन् । यी प्रश्नहरु अत्यन्त आवश्यक पनि छन्, किनकि यी विषयमा ख्याल नगर्दा छोराछोरी बिग्रने अवस्था तीव्र हुन्छ ।
वरपरको वातावरण, घरपरिवार र विद्यालयबाट एउटा बच्चाले जेजति सिक्छ, उति नै साथीसँगीबाट पनि सिक्छ । साथीहरुले भनेका कुरा छिटै मान्ने, समय बिताउन रूचाउने, घरमा भन्दा बाहिरै साथीसित रमाउने बालबालिकाका स्वभाव हुन् । तसर्थ, राम्रा साथी होऊन्, साथीसाथीका बीचमा सकारात्मक सोच र व्यवहारको विकास होस्, चुरोटखैनी, सुर्तीजस्ता दुव्र्यसनमा नफँसून्, चोरीचकारी र यौनदुव्र्यवहारमा नलागून् भनेर समयमै सचेत हुने र तिनलाई पनि महसुस हुने गरी दिशानिर्देश गर्ने अभिभावकको दायित्व हो ।
हामीलाई छोराछोरीको चिन्ता छ, त्योभन्दा तिनको भविष्यको चिन्ता छ, त्योभन्दा तिनका कारण पैदा हुने सामाजिक सम्मान र गौरवको चिन्ता छ, त्यसैले पनि यी सज्जन बनून्, असल बनून् र गौरव गर्नयोग्य नागरिक बनून् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
आजका थुपै्र किशोरकिशोरी दुव्र्यसनी बनेका छन्, गलत संस्कारका सिकार भएका छन् । हाम्रा बाबुनानी पनि त्यस्तै हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता आम अभिभावकको चिन्ता हो । यसका लागि हामी सजग बनौँ, तिनलाई प्रेमपूर्ण परामर्श गरौँ, दुव्र्यसनका दुष्परिणामबारे जानकारी दिऊँ, प्रेमपूर्ण व्यवहार गरौँ, असल साथी र परिवेशको सेवन गर्ने अवस्था निर्माण गरौँ, अवश्य राम्रो हुनेछ ।